Dowladda Soomaaliya oo kasoo horjeedsatay heshiiska dekada Berbera - BBC News Somali
Dowladda Soomaaliya oo kasoo horjeedsatay heshiiska dekada Berbera
2 Maarso 2018
War saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda aysan aqoonsanayn heshiiskii dhexmaray shirkadda DP World ee Imaaraatka iyo jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday gooni isu taagga ee Somaliland.
Heshiiskan oo sidoo kale ay qeyb ka tahay dowladda Itoobiya ayaa waxa uu dhigayaa in shirkadda DP World ay maamulayso dekeda Berbera, iyada oo leh saami dhan 51%, halka Somaliland ay yeelanayso boqolkiiba 30%, Itoobiyana 19%.
Shirkadda DP World ee Imaaraadka oo la wareegtay dekadda Berbera
Xilliga kuleylka xagaaga iyo berbera
War saxaafadeedka dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in aanan lagu wargalinin heshiiska, islamarkaasna uu hareer marsanyahay habraaca loo maro heshiisyada, kana hor imanayo midnimada Soomaaliya.
Heshiisyada DP World
Shirkadda DP World oo maamusha dekeda weyn ee Dubai ayaa muddo sanad ah wadahadalo kula jirtay Somaliland, horay ayaana la'isugu afgartay in uu dhaqangalo heshiiska.
Hase yeeshee lama sixiixin wixii shalay ka horeeyay, sababtana laga yaabaa in ay tahay doorashadii madaxweynenimo ee ay Somaliland ka dhacday, taas oo mid ka mid ah musharixiinta ugu cadcadaa uu ka hor yimid heshiiska, islamarkaasna aanan la hubin haddii uu xilka qabto in uu joojin lahaa iyo kale.
Heshiiska waxaa wada saxiixday Somaliland, DP World iyo dowladda Itoobiya oo la sheegay in saamigeeda ay ka iibsatay shirkadda Imaaraatka.
Inkasta oo uu heshiiskan muran badan ka dhex dhaliyay gudaha Somaliland, haddane waxaa markii dambe ansixiyay Aqalka Wakiilada Somaliland.
Balse sida ay sheegayso wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya "Dowladda federaalka waxay soo dhaweynaydaa cid walba oo dooneysa in ay maalgashi ku sameysato khayraadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka, hase yeeshee waxay caddaynaysaa in haya'daha dastuuriga ee dalka oo kaliya, sida xukuumada federaalka iyo Baarlamaanka Federaalka ay yihiin kuwa keliya ee ku shaqada leh go'aan ka gaarista iyo ansixinta heshiiskan iyo kuwa noociisa ah".
DP World waxa ay horay heshiis ula gashay dowlad goboleedka Puntland, in ay maamusho dekeda Boosaaso, mana jirto wax hadal ah oo ay dowladda federaalka iyo baarlamaanka federaalkaba ka dhaheen arrintaas.
Inkasta oo aysan kala caddeyn xiriirka ka dhaxeeya, haddane dowladda Jabuuti ayaa dhawaan joojisay heshiis ay horay ula gashay shirkaddan Imaaraatka laga leeyahay oo ku saabsanaa dekeda Jabuuti.
Heshiiska Berbera ayaa kusoo beegmaya xili maalmahan uu magaalada Dubai ku sugnaa Ra'isulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre.